SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway 2019.08.13276 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2019.08.13276 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား အစီအစဥ္မ်ား SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
SeatGeek အားကစားဖြစ်ရပ်များ (NFL, NBA, NHL, MLB, MLS), ဖျော်ဖြေပွဲ, ပွဲတော်များ, နှင့်ဘရော့ဒ်ဝေး / ပြဇာတ်ရုံပြပွဲထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်လက်မှတ်တွေဝယ်ပြန်လည်ရောင်းချရန်ဖို့စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်တွေ SeatGeek ရဲ့ 100% ဝယ်အာမခံချက်အားဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုနေကြပြီး, ပြန်လည်ရောင်းချသူများမျက်နှာတန်ဖိုးကိုအထက်တွင်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလက်မှတ်များစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။
◆ Interactive မှလက်ခံဇယား
တိုင်းအပိုင်းကနေမြင်ကွင်းကျယ်ဓါတ်ပုံတွေနှင့်အတူအပြန်အလှန်ထိုင်ခုံဇယားအပေါ်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်အကောင်းဆုံးကိုအပေးအယူ Explore ။ သငျသညျလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ရှေ့၌သင်တို့ထိုင်ခုံကနေမြင်ကွင်းကိုတူအဘယ်အရာကိုငါသိ၏။
နောက်တဖန်ချွတ်ဝမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဘယ်တော့မှမ, SeatGeek ပေါ်မှာရှိသောစာချုပ်အဆိုးဆုံးတန်ဖိုးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးထဲကနေ color-coded ဖြစ်ပါတယ်။
နေရာများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန် SeatGeek app ကို, လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမပရင်တာ၌ကိုယ်တော်၏က e-လက်မှတ်ပြပါ။
နောက်တဖန်မိုဃ်းကိုရွာစေအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများများအတွက်အားကစားကွင်းပြင်ပတွင်စောင့်ဆိုင်း။ အခမဲ့သို့မဟုတ် $$$ (သာယူအက်စ်) များအတွက်ကိုထိပုတ်ပါတွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း '' ဖုန်းများမှအပိုလက်မှတ်တွေကိုပို့ပါ။
မနက်ဖြန်ညဥ့်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲမတက်နိုင်သလား? တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါအတွက် SeatGeek ရဲ့ Marketplace ပေါ်တွင်သင်၏လက်မှတ်ရောင်း။ SeatGeek ပင်သင်တို့ကိုလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေရောင်းကူညီဖို့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအကြံပြုပါလိမ့်မယ်။
အလွယ်တကူမဆိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အတွက် 100+ က်ဘ်ဆိုက်များကနေလက်မှတ်တွေ browse ။ သငျသညျအနီးလာမည့်ဖြစ်ရပ်များကိုကြည့်ပါရန်အသင်း, အနုပညာရှင်, နေရာ, အမျိုးအစား, ဒါမှမဟုတ်အားကစား (ဘေ့စ်ဘော, ဘတ်စကက်ဘော, ဟော်ကီ, ဘောလုံး, Nascar, etc) ကရှာပါ။
Spotify တွင်တေးဂီတကိုနားထောင်နေစဉ်လာမည့်ဖျော်ဖြေပွဲအကြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိ, Google ဂီတ Play, ဒါမှမဟုတ် SoundCloud ။
◆ သင်၏ Way ကိုဝယ်ပါ
အဆင်ပြေမှာ Android Pay ကိုသို့မဟုတ် Credit Card ကိုကနေတဆင့်ပေးဆောင်။
ဖျော်ဖြေပွဲ & ပွဲတော်လက်မှတ်များကို
Ariana Grande, Billy ယောလ, ဘရူနိုမားစ်ဂြိုဟ်, ဖလော်ရီဒါဂျော်ဂျီယာလိုင်း, Garth Brooks, Green Day, Justin Bieber ကို, လုကာ Bryan, Shawn Mende, တိ McGraw, နှစ်ဆယ့်တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးက The Weeknd
ဘရော့ဒ်ဝေး & ပြဇာတ်ရုံလက်မှတ်တွေ
Aladdin, Cirque du Soleil, Hamilton က, ဂျာစီ Boys, Mamma Mia သည်အော်ပရာ၏ Phantom, Mormonism ၏စာအုပ်, ခြင်္သေ့ဘုရင်ဆိုး
NFL, NBA, MLB, NHL, NCAA, MLS, & PLAYOFF လက်မှတ်တွေ
- အရီဇိုးနား: Cardinal, Diamondbacks, Phoenix မြို့ဝံပုလှေ, Suns
- ကယ်လီဖိုးနီးယား: LA က Dodgers, Lakers, ညှပ်, ကောင်းကင်တမန်, USC Trojan များ, ဆန်ဖရန်စစ္စကို Giants, 49ers, Anaheim duck, ရွှေနိုင်ငံတော်စစ်သည်များ, Oakland ပြေးခုံပစ်, Raiders, Sacramento ဓမ္မရာဇဝင်, San Diego မှ Chargers, Padres, San Jose ငါးမန်း
- ကော်လိုရာဒို: Avalanche, Rocky, Denver Broncos, အခဲ
- ဖလော်ရီဒါ: Panther, Gators, Orlando တွင်မှော်, Jacksonville Jaguar, မိုင်ယာမီအပူ, လင်းပိုင်, Marlins, Tampa Bay တွင်ခဲ့ကြတယ်, Lightning, Rays
- ဂျော်ဂျီယာ: အတ္တလန်တာ Falcon, ဟော့ကင်း, Brave
- အီလီနွိုက်: ချီကာဂိုဝက်ဝံ, ဘလက်ဟော့, နွားသိုး, ပေါက်တွေ, အဖြူရောင် Sox
- Indiana ပြည်နယ်: Pacers, Notre Dame အိုငျးရစျ, Indianapolis Colt Fighting
- Kansas ပြည်နယ်: တွင် Kansas City ချုပ်များ, Royal
- ကီ: Wildcat
- Louisiana: LSU ကျား, New Orleans သူတော်စင်, ဝံပိုငှက်
- မေရီလန်း: Terrapins, Baltimore ကျီး, Orioles
- မက်ဆာချူးဆက်: Boston Red Sox, Celtic, Bruins
- မီချီဂန်: Wolverines, ဒက်ထရွိုက်ခြင်္သေ့, အနီရောင် Wings, ကျား, piston
- မင်နီဆိုတာ: Timberwolves, အမွှာပူး, ဗိုက်ကင်း, တောရိုင်း
- မစ်ဆူရီ: စိန့်လူးဝစ် Cardinal, ထီး, ချယ်လ်ဆီးအသင်း
- နယူးအင်္ဂလန်: မျိုးချစ်
- နယူးဂျာစီ: မန်ယူအသင်း၏
- နယူးယောက်: Giants, ကီး, Knicks, ဂျက်လေယာဉ်များ, Mets, Rangers, ကျွန်းများ, ဘရွတ်ကလင်းပိုက်ကွန်, Buffalo ဥပဒေကြမ်းများ, ဖုံးကိုဓားရှည်
- မြောက်ကာရိုလိုင်းနား: Panther, ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း, Charlotte Hornet, UNC မှတာဒေါက်, Duke အပြာရောင်မန်ယူအသင်း၏
- အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်: OSU Buckeyes, စင်စင်နာတီ Bengal, လီဗာပူး, Cleveland အစ်အောက်, အင်ဒီးယန်း, Brown, ကိုလံဘတ်အပြာရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီ
- ဥက္ကလာဟိုးမား: မိုးကြိုး
- အော်ရီဂွန်: duck, Portland Trail Blazers
- Pennsylvania ပြည်နယ်: Philadelphia တွင်လင်းယုန်, Flyer, Phillies, 76ers, Pittsburgh Steelers, Pirates, Penguins, Panther
- Tennessee ပြည်နယ်: ဖို့အတွက် Titans တွေက, စတေနာ့ဝနျထမျး, Nashville Predator, နောဖပြည်၌ Grizzlies
- တက္ကဆက်: Rangers, တက္ကဆက် A & M Aggies, Dallas မြို့က Cowboys, Mavericks, ကြယ်, ဟူစတန်ရော့ကက်, တက္ကဆက်, Astro, San Antonio တွင်စပါး
- Utah: ဂျက်ဇ်ဂီတ
- ဝါရှင်တန်: Seattle Seahawks အဏ္ဏဝါ
- ဝါရှင်တန် D.C: နိုင်ငံသားများ, Redskins, Wizards, စာလုံး
- Wisconsin ပြည်နယ်: အစိမ်းရောင်ဂလားပင်လယ်အော် Packers, Milwaukee ဘီယာကုမ္ပဏီကြီး, ခေါ, Wisconsin ပြည်နယ်ဟာရှ
- ကနေဒါ: တိုရွန်တိုမေပယ်ရွက်, Raptor, အပြာရောင် Jays
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway အား အခ်က္ျပပါ
minefavs စတိုး2388
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2019.08.13276
ထုတ်လုပ်သူ Ticketmaster L.L.C.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://seatgeek.com/privacy
Release date: 2019-08-15 06:00:29
လက်မှတ် SHA1: 9D:A4:95:C0:4D:CD:08:B6:42:E2:28:FE:11:3A:5B:A7:07:E6:D6:3F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jack Groetzinger
အဖွဲ့အစည်း (O): "SeatGeek
SeatGeek – Tickets to Sports, Concerts, Broadway APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ